Soomaali (somaliska) - Säkerhetspolisen
Ku saabsan ciidanka nabadsugidda
Ciidanka nabadsugiddu waa hay’ad ammaansugid oo ilaalisa hannaanka demoqraadiyadda Iswiidhen xorriyadda iyo xuquuqda muwaadiniinta iyo ammaanka qaranka. Waxyaalaha aan qabanno waxaa ka mid ah inaan ka hortagno oo caddeynno dembiyada khatarta ku ammaanka qaranka, inaan la dagaalanno argagaxisanimada iyo inaan ilaalinno hoggaanka dhexe ee qaranka.
Ciidanka nabadsugidda waxaa u shaqeeya ilaa 1200 hawlwadeen. Badankood waxaa saldhig u ah magaalada Stockholm, laakiin waxaa xafiisyo goboleed uga furan yihiin magaalooyinka Umeå, Uppsala, Örebro, Norrköping, Göteborg iyo Malmö. In xoogaa ka badan kala bar oo bar shaqaalaha ciidanka nabadsugiddu waa askar. Hawlahoodana waxaa ka mid ah ilaalo, baarayaal iyo kuwo sameeya dabagal. Ciidaanka nabadsugidda waxaa kaloo ka shaqeeya shaqaale kale oo xirfado kala duwan ku shaqeeya, sida kuwo lafagura arrimo, farsamayaqaanno, turjubaano qoraal, aqoonyahan dhaqaale, sharciyaqaano, turjubaano iyo maamulayaal.
Hawlaha ciidanka nabadsugidda waxaa guud ahaan loo qaybiyaa shan qaybood:
Ka hortagga basaasidda oo micneheedu yahay in laga hortago oo la kashifo wixii basaasnimo ama sirdoon sharcidarro ah. Kuwaasi waxay noqon karaan kuwo ku wajahan Iswiidhen ama danaha Iswiidhen ku leedahay dalalka kale ama danaha dalalka kale ku leeyihiin Iswiidhen ama in basaasid iyo sirdoon laga ururiyo dadka qaxootiga ah.
Ka hortagga argagaxisanimada oo micneheedu yahay in laga hortago oo la kashifo falalka argagaixisooyinka ah oo ku wajahan Iswiidhen ama danaha dalalka kale ku leeyihiin iswiidhen, falalka argagaxisanimada oo laga fuliyo dalalka kale, ururo Iswiidhen ku sugan oo qayb ka ah dallad argagaxisanimo caalami ah, iyo taageeridda iyo maalgelinta hawlaha argagaxisanimada.
Ilaalinta dastuurka oo micneheedu yahay in laga hortago falal ay ka mid yihiin silcinta ama dhib u geysashada, hanjabaadda, xoog-isticmaalka, in cid wax lagu khasbo ama musuqmaasuqyada oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in wax laga beddelo habka ay hawlaha dimoqraadiyadda qaranku u shaqeeyaan. Hawlaha ciidanka nabadsugiddu waa in laga hortago ama la joojiyo xooggaga si sharcidarro ah isugu dayaya in ay saameyn ku yeeshaan go’aamada siyaasiinta, fulinta go’aamada siyaasiinta iyo doodda xorta ah ee bulshada ka dhex-abuuranta.
Sugidda amaanka qaranka oo micneheedu yahay in sare sare loo qaado heerka ammaanka qaranka. Xog-ururin iyo talooyin loo gudbiyo hay’adaha qaranka oo hawlahoodu ku xiran yihiin ammaanka ama nabadsugidda qaranka, iyo sida ay sare ugu qaadayaan ammaanka iyo ilaalinta hawlahooda ugu muhiimsan. Kontaroolada diiwaanada iyo kor ka ilaalinta ayaa ka mid ah hababka kale oo lagu sugo in ammaanka hawlaha qaranku u noqdaan kuwo u ilaashan habka ugu habboon.
Ilaalinta shakhsiyaad muhiim ah waxay ka hadleysaa hawlaha kor-ka-ilaalinta iyo ammaanka hoggaanka dhexe ee qaranka, qoyska reer boqor, safaaradaha dalalka kale u fadhiya Iswiidhen iyo booqashooyinka ay madaxda dalalka kale ku yimaadaan halkaan iyo waxyaalo kale oo la mid ah.
Ciidanka nabadsugiddu wuxuu kaloo shaqeeyaa faafreebka, oo micneheedu yahay in laga hortago faafinta, haysashada iyo soosaaridda hubka waxgummaada. Shaqadu waxay ugu horreyntii ku saabsan tahay in laga hortago in Iswiidhen laga gudbiyo ama loo sii mariyo wixii aqoon ah, ama alaab, ama maaddooyin ama horumarinta hubka gummaadka oo la doonayo in cid kale loo gudbiyo. Hawluhuna waxay u dhacaan hab lala kaashanayo hay’adaha kale.
Telefoon: 010-568 70 00 (waxaa laga shaqeynayaa saacad walba)
Adareeska boosta: Box 12312, 102 28 Stockholm
Adareeska booqashada: Bolstomtavägen 2, Solna